Iinkqubo zokuguqula iifoto zibe ziividiyo - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 13/06/2022 22:31 | Iinkqubo
Ukuba ufuna ukuguqula iifoto zakho zibe ziividiyo ukuxhasa iiprojekthi zakho zedijithali, ukwindawo elungileyo. Siza kukhomba ezinye zezona nkqubo zingcono zasimahla kunye nezihlawulelwayo. Uya kufunda ezona zixhobo zibalaseleyo zokunika iifoto zakho ujiko lwe-360-degree, ukongeza ubuchule kunye nolonwabo.
Zombini iividiyo kunye nemifanekiso eshukumayo zizinto ezimbini ezikhethekileyo, kuba ngexesha elifutshane kakhulu zisungula umyalezo ngokuthe ngqo kubaphulaphuli bethu. Inkqubo yokuguqula iifoto zibe ziividiyo, Inokuba ngumceli mngeni kuninzi lwenu ukuba awuzisebenzisi izixhobo ezithile kuyo.
Umxholo obonakalayo kubomi bethu bomntu, ngokusetyenziswa kweintanethi zentlalo, kunye nasemsebenzini, kubaluleke kakhulu ukuba kuya kuba nefuthe kubaphulaphuli abahlukeneyo abanokusibona. Sithi njengabadali, ngubani Kufuneka sichaphazele aba baphulaphuli sisebenzisa izinto ezisenza sahluke kwabanye.
1 Izixhobo ezilungileyo zokuguqula iifoto zibe ziividiyo
1.1 Ividiyo yeAdobe Spark okanye iAdobe Express
Izixhobo ezilungileyo zokuguqula iifoto zibe ziividiyo
Kweli candelo, uya kufumana a ukhetho oluncinci lwento kuthi ezinye zeenkqubo ezilungileyo zokuguqula iifoto kwividiyo kwimarike. Ayizizo ezona zilungileyo kuyilo lwabo lojongano, kodwa nakwimisebenzi yabo emininzi kunye nokhetho abanokuthi basebenze ngalo kwaye bafezekise iziphumo zowona mgangatho ubalaseleyo.
Ividiyo yeAdobe Spark okanye Adobe Express
Njengoko sonke sisazi, iphakheji ye-Adobe yaziwa phakathi kweengcali kunye nabathandi behlabathi lobugcisa begraphic, onokuthi uyila iilogo, amaphepha ewebhu, uyilo lokuhlela, njl.
Esinye sezixhobo ezinokufumaneka yi-Adobe Spark Video, a isixhobo ekulula kakhulu ukusisebenzisa onokuthi ngaso uguqule iifoto zakho zibe yividiyo. Kwakhona, ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso iividiyo ngokongeza umbhalo, uhlengahlengiso lokudlala kwakhona, ukhethe uyilo lwesiqhelo, njl.
Kufuneka nje layisha umfanekiso wakho kwaye wongeze kwisilayidi, cwangcisa wonke umxholo, zombini imultimedia kunye nokubhaliweyo. Into elandelayo iya kuba kukukhetha umxholo wezilayidi kwaye uwulungelelanise kwisitayile sakho. Lungisa amaxesha, yenza ividiyo ibe yeyakho kwaye ugqibile.
esinye isixhobo, umenzi wevidiyo yeefoto onokunceda uninzi lwakho ukuqokelela zonke iifoto zakho zamaxesha owuthandayo, ngexesha elinye. Le nkqubo iyaziwa phakathi kwabasebenzisi, kuyo, kuvunyelwe ukongeza umculo, imifanekiso emininzi ngexesha elinye, ezinye iividiyo, njl.
Kuya kufuneka uvule inkqubo, kwaye ulayishe iifoto ozifunayo. Okulandelayo, uya kukhetha ithempleyithi okanye izilayidi ukongeza le mifanekiso. Lungiselela izinto ezahlukeneyo ngokuthanda kwakho, ukuhlela, isivuno, ukutshintsha ubungakanani, njl.. Nje oku, yongeza izicatshulwa ukuba ucinga kuyimfuneko kwaye ukhuphele.
Ethandwa kakhulu, kwabo abasebenzisi abajonge ukuguqula imifanekiso yabo ibe ziividiyo, kwaye banokwenza njalo ngeetekisi. Esi sixhobo se-intanethi sikuvumela ukuba ulayishe ngokulula imifanekiso kwaye uyiguqule ibe yividiyo ngenjongo yokuchaphazela uluntu. Unokongeza umbhalo, iitemplates zesiko, iziphumo, iinguqu, i-InVideo sisixhobo esipheleleyo.
Kufuneka ungene nje, khetha kwiitemplates ezifumanekayo ezingaphezu kwamawaka amahlanu, layisha imifanekiso ofuna ukuyiguqula, yongeza izinto ezahlukeneyo kunye notshintsho kwaye, ekugqibeleni, khuphela ifayile kwisisombululo esifunwayo.
Ukuba ufuna ukuguqula iifoto zibe yividiyo ngokulula kakhulu, esi sixhobo se-intanethi kunye nemisebenzi yaso eyahlukeneyo siya kukunceda. Ngojongano olulula kakhulu, i-Animoto ngaphandle kwamathandabuzo yinkqubo ekungafuneki ukuba iphoswe ziingcali ezininzi kwicandelo loyilo nakwihlabathi lemultimedia.. I-Animoto ineenguqu ezininzi ezahlukeneyo kunye nezixhobo zokubhaliweyo ukuthatha indalo yakho ukuya kwinqanaba elilandelayo.
Layisha imifanekiso kwaye ukhethe itemplate ehambelana neemfuno zakho. Emva koko, hlengahlengisa kwaye ulungelelanise ezi foto, zinciphise, zihambise, zongeza izihluzi, njl. Yenza umfanekiso ngamnye ube nesitayile esikhethekileyo. Bandakanya izicatshulwa, ukuba ucinga ukuba ziyimfuneko kwaye ukhethe isitayile esenza ukuqamba kwakho kugqame.
Inkqubo yokuhlela ividiyo enemisebenzi eyahlukeneyo yokuhlela esisiseko njengokusika, ukwahlula, ukongeza umculo, ungqamaniso, njl. Esi sixhobo, qaphela ukuba sinesilingo sasimahla seentsuku ezintandathu kuphela. Phakathi kwabasebenzisi bolu hlobo lwezixhobo, I-VideoPad ifumene ukuthandwa kumaxesha amva nje ngenxa yokuphathwa kwayo ngokulula kunye nokhetho oluninzi.
Ikunika ithuba lokusebenza ngaphezulu kwe-50 yeenguqu ezahlukeneyo kunye neefomathi, apho unokulayisha indalo yakho kumaqonga afana neYouTube. Ngokuxhomekeke kwinani kunye nobunzima beefayile osebenza nazo, zinokucotha ngezihlandlo ezithile.
Ngokulula Ngokucofa okumbalwa, uya kukwazi ukwenza ividiyo yemifanekiso kwi-Intanethi ngendlela elula kakhulu. Ukuba ukhetha esi sixhobo, uya kukwazi ukwenza iividiyo ngokulula, ulayishe nje iifoto zakho, uzihlele, uzilungelelanise kwaye uziphilise.
Amanyathelo omawuwalandele ukuphumeza iziphumo zobungcali zezi zilandelayo; cofa kukhetho lokwenza ividiyo entsha kwaye ukhethe useto oluhlangabezana neemfuno zakho. Yiya ukongeza izigcawu kwaye uqale ukulayisha imifanekiso yakho. Lungisa iifayile ezixeliweyo kunye nesetingi ezikhoyo. Khetha ukhetho lwesiphumo somfanekiso kwaye uqalise ukuzisa iifoto zakho ebomini.
Njengoko sele sibonile nezinye izixhobo, iClideo yenye onokuguqula ngayo iifoto zakho zibe ziividiyo. Ukuba ubamba le nkqubo, unokongeza iifayile ezahlukeneyo ngexesha elinye, kungekuphela imifanekiso, kodwa kunye neeGIFS kunye neevidiyo. Liqonga lasimahla kwi-intanethi, apho kungekho sicelo esongezelelweyo siyimfuneko.
Layisha imifanekiso oyithandayo, hlengahlengisa ezi fayile ngokulandelelanayo, zihlele ngendlela othanda ngayo, unokuzinqamla, uzisondeze, uzihlele, njl. Yongeza iiklip zeaudio ozithandayo, zilungise kwaye Ukuba isiphumo siyakuqinisekisa, ungalibazisi okwesibini kwaye uqhubeke nokukhuphela.
Kulula kakhulu, inkqubo yokuguqula iifoto zibe ziividiyo ngezi nkqubo sizikhankanyileyo. Kuya kufuneka ucace ukuba yeyiphi imifanekiso oza kusebenza nayo kwaye wenze ividiyo enomtsalane. Khumbula ukuba kuyimfuneko ukwazi ukuba sesiphi isixhobo esizifanela kakhulu iimfuno zakho kwaye sesiphi oziva ukhululekile xa usebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubomi beByte » Iinkqubo » Iinkqubo zokuguqula iifoto zibe ziividiyo
Indlela yokuvula iifayile ze-CBR